Xabada oo ku faaftay Xaafadaha Damascus ee Caasimada dalka Syria & Madaxweeyne Bashar...;(Daawo Muuqaal+Warbixin) !! - iftineducation.com
iftineducation.com – Tan iyo bishii Maarso ee sanadkii 2011-dii dalka Syria waxaa ka taagneed colaad u dhaxeeysay qaar ka tirsan Shacabka dalka Syria iyo Ciidamada dawlada Syria oo difaacaya Madaxweeynaha dalkaas Mr.Bashar Al Asad.
Dagaalka xoogiisa waxa uu ka socon jiray Gobolo iyo Degmooyin aad uga fog Caasimada dalka Syria ee Dimishiiq ama Damascus qofba sida uu u yaqaan, balse iminka sheekadii weey is badashay waxaana Caasimada Damascus si qarsoodi ah ku soo galay Xoogaga Mucaaradka oo Baasuukeyaal iyo Daba-jeexyo wato kuwaas oo durbadiiba xirtay Jidad fara badan oo muhiim ah waliba mara Caasimada dhexdeeda.
Rasaasta Wiiftada ah iyo Xabadaha ayaa dhamaan ku faafay xaafadaha Caasimada waxaana maanta oo ugu dambeeysay Diyaarad Helikobtar ah lagu soo dul riday Xaafada Sabaa-Bahrat-Platz oo ay isku fara saareen xoogaga Mucaaradka iyo Ciidamada Xukuumada Syria oo watay Taangiyo aad u fara badan.
Ciidamada Mucaaradka oo Hub fara badan helay waxeey bilaabeen inay Hoobiyaal ku garaacaan goobaha ay degan yihiin Masuuliyiinta xukuumada Syria iyo Taageerayaasha Madaxweeyna Bashar Al Asad balse dhankooda waxaa loogu jawaabayay Madaafiicda goobta iyo Rasaasta Taangiyada oo dumisay guryo aad u fara badan
Dagaalka ka qarxay Caasimada Syria ayaa waxaa la sheegay shalay iyo maanta oo kaliyah inay ku geeriyoodeen ugu yaraan dad lagu qiyaasay 150 qof kuwaas oo 80 ka tirsan ay ahaayeen dhinacyada Dagaalamaya .
Kassem Saadeddin oo u hadlay Mucaaradka dagaalamaya ee (FSA) waxa uu sheegay in aysan Dagaalka joojin doonin waliba uu yahay sidii uu u biloowday ilaa ay ka saarayaan Madaxweeyne Bashar Al Asad oo caasimada lagu soo dhabar jabiyay intii uu ku mashquulsanaa Gobolo kale oo caasimada ka fog sida magaalada Homs.
Wariye Dood kulul oo Tv-Live ah ka qeyb qaadanayay oo isaga oo hadlaya Dhintay iyo Ninkii la doodayay oo Geeridiisa ku farxay